China Open Type Fiber Laser tingcha Machine Manufacturer na Supplier | Guo Hong
Open ụdị eriri laser ịcha igwe, dum igwe adopts a ogbe na pinion mbanye usoro, pụrụ iche e mere maka nile di iche iche nke metal Ibé akwụkwọ. Ọ dị mfe ndị ọrụ iji rụọ ọrụ ma debe. N'otu oge ahụ, usoro mgbakọ siri ike na-eme ka arụmọrụ nke igwe ahụ nwee oke nkenke. Ngwa anya eriri laser ịcha igwe na-enye ndị ọrụ ikike ịkụcha ike na arụmọrụ yana ngwa ngwa dị elu dị oke, nke bụ ezigbo nhọrọ maka ndị ọrụ ịhazi ụdị akụ na ụba.
Nchekwa ike na nchedo gburugburu ebe obibi
A na-ewu ụlọ ọrụ eletriki niile na isi iyi laser n'ime ụlọ ọrụ na-achịkwa onwe ha na -emepụta uzuzu iji mee ka ndụ eletriki dịkwuo ogologo.
A na-eji ụlọ ọrụ na-ejide ikuku ikuku maka akpaka na-agbanwe agbanwe. Nke a nwere ike igbochi oke mbibi ọnọdụ okpomọkụ na mmiri.
1.High nkenke ọnwụ
2.High ọsọ na arụmọrụ * Nlekọta dị ala
4.Green na nchekwa ọrụ ọnọdụ
5.3-afọ akwụkwọ ikike
Ọrụ 6.24 na ntanetị n'ịntanetị
7. Ndụ nkwado nkwado oge.
Nke gara aga: Ofụri Esịt nchọ Fiber Laser tingcha Machine
Osote: Exchange Isiokwu Fiber Laser tingcha Machine
ọnụahịa ọnụahịa laser
cnc laser igwe
eriri cnc laser
eriri laser ụgwọ
eriri laser egbutusị
eriri laser ịcha igwe soplaya
laser cutter igwe n'ihi na ire
laser ọnwụ igwe na-eri
metal laser cutter maka ire ere
obere eriri laser ịcha igwe